November 15, 2020 - Online Hartha
16.11.2020 မှ 22.12.2020ထိ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်တာ ကံကြမ္မာ ဟောစာတမ်း
November 15, 2020 by Online Hartha
၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ သင့်ကံကြမ္မာ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစာတမ်း အထက်လူကြီးနှင့် ပက်သက်ပြီးတော့ မိမိ မိသားစုအပေါ် ဖိအားပေးမှုတွေ ကြုံနေရတယ်။ အလုပ်က ထွက်ချင်တဲ့ စိတ်တွေပေါ်နေမယ်။ ပြောင်းချင်တဲ့ စိတ်တွေ ပေါ်နေမယ်။ မပြောင်းပါနဲ့။ မထွက်ပါနဲ့လို့ အကြံညာဏ်ပေချင်ပါတယ်။ မကြာခင်အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ခရီးတစ်ခု သွားရလိမ့်မယ်။ ထိုခရီးမှာ မိတ်ဆွေအသစ်တွေ လုပ်ငန်းအသစ်တွေ ရပါလိမ့်မယ်။ ရွှေ လှေ လှည်း ကိစ္စမျိုးတွေ အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကိစ္စ အာမခံခြင်းတော့ ရှောင်ပါ။ ငွေကြေးအစုလိုက်ဝင်တာမျိုးတွေ ဆုကြေးရတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်တယ်။ မိမိ မွေးလကျော်ရင်တော့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကံကောင်းခြင်းတွေ ကံမကောင်းခြင်းတွေကို ခေတ္တ စောင့် ဆိုင်းပြီးမှ လုပ်ချင်တာကို … Read more
အလှအပကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ မမ….တို့ ရေ… ကြက်တောင်ပံကြော်ကို နေ့ စဉ်ရက်ဆက်စားသုံးခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက်တကယ့် အန္တရာယ်တခုဆိုတာက်ို မျှဝေလိုက်တာပါ….ဒါကတော့ စင်ကာပူက အမျိုးတမီးတဦးရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် အကြောင်းလေးပါ။ မကြာသေးမီက အမျိုးတမီး တယောက် သူ့ ရဲ့ဗိုက်ထဲမှာ သွေးခဲလိုလို ပြည်တည်သလိုလိုိ အခဲတခု ဖြစ်ပြီး ကြီးကြီးလာတာကြောင့် ခွဲစိတ်ပြီး ထုတ်ပြစ်လိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်…. အဲဒီအခဲဟာ ခွဲစိတ်ပြိးကြည့်လိုက်တော့ မဲပုပ်နေတဲ့သွေးခဲကြီးပါတဲ့…. သူမကတော့ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်မှာ ပုံမှန်ပြန်ကောင်းလာမယ်လို့ ပဲ ထင်ခဲ့တာပေါ့… ဒါပေမယ့်.. သူထင်တာနဲ့ တတ်တတ်စင်အောင်လွဲခဲ့ပါ့တယ်…ခွဲစိတ်ထုတ်ပစ်ပြီး လအနည်းငယ်အကြာမှာ အရင်လိုပဲ ဗိုက်ထဲမှာ သွေးခဲလိုလို ပြည်ခဲလိုလို ပြန်ဖြစ်လာပြန်ရောတဲ့…. ဒုက္ခပါပဲနော်…သူလဲ အရမ်း စိတ် သောကရောက်ရတာပေါ့….ဒါနဲ့ သားဖွားမီးယပ်ပါရဂူ တယောက်ဆီ ချက်ချင်းသွားပြကြည့်တော့…ဆရာဝန်က သူမကို မေးခွန်းတခုမေးတယ်…. မေးခွန်းက သူမအတွက်တော်တော်ကိုထူးဆန်းနေတယ်…..ကြက်တောင်ပံကို နေ … Read more
ငါးစားသူတိုငျး သိထားသငျ့သညျ့ ငါးအရိုးစူးလြှငျ ပြောကျကငျးစမေညျ့ နညျးလမျးကောငျးမြား
သငျ ၏ နအေိမျ မကျြနှာလှညျ့သော အရပျကို ကွညျ့၍ လာဘျလာဘ ပှငျ့လနျးစသေောနညျး
လာဘ်ပွင့် စေသော ယတြာ မျိုးစုံ ရှိပါသည်။ ထို ယတြာ နည်းများစွာ တွင် လူတစ်ဦး တစ်ယောက် ၏ မွေးနေ့မွေးရက် မွေးသက္ကရာဇ် များကို အဓိက ထား၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း များကိုသာ တင်ထားတာ များပါတယ်။ အခုပြောမှာ ကတော့ မိမိနေအိမ် ၏ မျက်နှာ လှည့်ရာ အရပ် ကို အဓိက ထား၍ လာဘ်ပွင့် အောင် လာဘ် လာဘ ရွှင်လန်းအောင် ဆောင်ရွက်ရသော နည်းကို ပြောပြပါမည်။ အဲဒီလို ဆောင်ရွက်တဲ့ အတွက် ဘာ အကျိုးကျေးဇူး တွေ ကို ရရှိနိုင်သလဲ ဆိုတော့ အဲဒီနေအိမ် မှာ နေထိုင်တဲ့ လူသား အားလုံး မိမိ တို့၏ … Read more
ဝက်ခြံကင်းစင်ပြီး ညီညာတဲ့ အသားအရည်လေး ဖြစ်အောင်
ဝက်ခြံကင်းစင်ပြီး ညီညာတဲ့ အသားအရည်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုမျက်နှာကိုဆေးကြောမလဲ မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အရေပြားက တစ်ခါတစ်လေ မညီညာပါဘူး။နဖူးပေါ်မှာ ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမာရွတ်တွေကြောင့် အမဲစက်တွေဖြစ်နေတာတွေ , နှာခေါင်းမှာ နေလောင်ဒါဏ်ကြောင့် မဲနေတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုမညီမညာဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာက အရေပြားတွေကို မျက်နှာပုံမှန်သစ်ပေးတာနဲ့ ညီညာပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလေးကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ ပါဝင်မယ့် ပစ္စည်းနှစ်ခုကတော့ ခရမ်းချဉ်သီးရယ် နွားနို့ရယ်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ နွားနို့ကို ရောပြီး အပါတ်တိုင်းမျက်နှာကို ဆေးကြောပေးခြင်းက မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ဝက်ခြံတွေကိုလျော့ပါးစေပြီးတော့ ညီညာတဲ့ အသားအရေကို ရရှိစေနိုင်မှာပါ။ ပထမဦးဆုံးအနေတဲ့ လတ်ဆတ်ပြီး မကြိုချက်ရသေးတဲ့ နွားနို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ခရမ်းချဉ်သီး အမှည့်လိုအပ်ပါတယ်။ခရမ်းချဉ်သီးအမှည့်ကို အလယ်ကလှီးပြီး အထဲက အနှစ်ကိုယူရမှာပါ။ အစေ့တွေကို စစ်ပြီးယူဖို့တော့လိုပါတယ်။ အစေ့တွေကိုဇကာစ သေးသေးလေး ဒါမှမဟုတ် ပိတ်စပါးပါးလေးနဲ့ စစ်ပြီးတော့ ညှစ်ချရမှာပါ။ ပြီးရင် … Read more
သင် ဘယ် လမှာ မွေးတာလဲ ? ဖတ်ကြည့်လိုက် အရမ်းမှန်တယ်နော်…
သင်… ဘယ်လမှာ မွေး တာလဲ.. ? January မွေးဖွားသူတွေဟာ…. – ရိုးသားဖြောင့်မတ် မှန်ကန်သူများဖြစ်ကြသည်။ – အစွဲလမ်းကြီးကျသလို အနစ်နာခံချစ်တတ်ကြသည်။ – သစ္စာကြီးကြသည်။ -အမြင်ကျယ်သူများဖြစ်ကြပြီး မေတ္တာရေးတွင် လေးနက်သူများဖြစ်သည်။ February မွေးဖွားသူတွေဟာ…. – အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ -အလွန်နားလည်ခွင့်လွှတ်တတ်သော မေတ္တာရှင်များဖြစ်ကြသည် ။ – အေးလွန်းတဲ့သူများဖြစ်၍ မချစ်တတ်သူ…ရေခဲတုံးများဟု အထင်ခံကြရသည် ။ – ရှက်တတ်သူများလည်း ဖြစ်သည် ။ March မွေးဖွားသူတွေဟာ….. – သံယောဇဉ်ကြီးမားသူများဖြစ်ပြီး အချော့ကြိုက် အပျော့ကြိုက်သူများဖြစ်သည် ။ – မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေပေါ် အရမ်းတွယ်တာသည် ။ – သစ္စားတရားကြီးမားသူများဖြစ်ပြီး မိမိရဲ့စကားတစ်ခွန်းကို တန်ဖိုးထား တာဝန်ယူတတ်သူများဖြစ်ကြသည် ။ April မွေးဖွားသူတွေဟာ….. … Read more
နာမညျကိုသိရုံနှငျ့ စိတျဓါတျကို သိနိုငျအောငျ တှကျခကျြနညျး
သင့်ရဲ့ နာမည်ကို ကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်နေ သဘာဝ ကို အကြမ်းဖျင်း တွက်လို့ရတဲ့ နည်း ရှိတယ်…။ သင့်ရဲ့လူသိများသောအမည်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်ပါ။ အ-အာ-ဥ-သြ – ဧ = ၁ က-ခ-ဂ ဃ -င = ၂ စ-ဆ-ဇ-ည-ဈ = ၃ ရ-ယ-လ-၀ = ၄ ဖ-ပ-ဘ-မ-ဗ = ၅ သ-ဟ = ၆ ဓ-ဒ-န-တ-ထ – ဌ = ၇ (#ဥပမာတွက်ပြမယ်) _ ဇော် မင်း ထက် = ၃ + ၅ + ၇ = ၁၅ = ရပါတယ် ၁၅ … Read more
ဟိုတယျ အခနျး နံပါတျ​ (၃၉)မှ အဖွဈအပကျြ…
ဖုန်းတွေမပေါ်သေးတဲ့ခေတ်… အပြာကားတွေကို ဖုန်းထဲမှာ ကြည့်လို့မရတဲ့ ခေတ်မှာပေါ့…. အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ လူရည်သန့် လူငယ်တျောက် ဟိုတယ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ ကောင်တာရှေ့ရောက် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် သူဌေးကိုမေးတယ်။ man – အခန်းနံပါတ် ၃၉ အားလား….. boss – အားပါတယ်ဗျ…. man – ကျွန်တော်ယူလို့ရမလား….. boss – ရတာပေါ့ဗျ…. man – ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ….. လူငယ်က အခန်းထဲမဝင်ခင် ကွန်ဒုံး (၃)ခုရယ် ဓားမြှောင်( ၆ )ချောင်းရယ်…. လက်ဖက်ရည် (၂ )ခွက်ရယ် ရနိုင်မလားလို့ သူဌေးကိုမေးတယ်။ သူဌေးကလဲ ရနိုင်ပါတယ်လို့ သဘောတူလိုက်တယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူအနဲငယ် အံသြသွားပြီး စိတ်ရှုပ်သွားတာတော့ အမှန်ပဲ။ လူငယ်ကို မေးစရာတွေရှိလာတယ်။ လူငယ်ကအခန်းကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက် … Read more
မရယျပဲ နနေိုငျတယျလို့.. အာမခံရဲရငျ ရှဲယူပွီး ပုံလေးကို နှိပျကွညျ့လိုကျလေ…
ရဟန်းဝတ်တာ သုံးရက်သာရှိသေးတဲ့ “တောဘုန်းကြီး” အခုတော့ အကြီးအကျယ် အခက်တွေ့ရတဲ့အဖြစ်
ဒီနေ့ ကိုယ်တော် တစ်ပါးက ကျောင်း အတွက် အလှူခံ ရန် မြို့သို့ကြွသည်။ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းကြီး က ထို ကိုယ်တော် အစား ဆွမ်းခံကြွရန် အမိန့်ရှိသည်။ ရှင်ဇနိတ မငြင်း ရဲ။ စစ်တပ် မှာဆိုရင် မလုပ်နိုင်လျှင် သတင်းပို့။ဖြစ်သေးသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း မှာ တော့မရ။ ကြိမ်လုံးနှင့် တင်ပါး နှစ်ပါးသွား ကရမည်။ မကရလျှင်တောင် အနည်းဆုံး ပုံးကြောင်(ထမင်းငတ်)လိမ့်မည်။ ထမင်း တော့ငတ်၍မဖြစ်…တစ်နေ့မှ တစ်နပ်သာ စားရတာကိုး။ ဒီတော့ ဆွမ်းခံ ထွက်ရတာပေါ့။ကိုယ်လည်း ၅ရက်ထဲ ဝတ်တာပဲလေ။ ဒီလောက်တော့ လုပ်ရမှာပေါ့။ခု ကိုယ်တစ်ပါးတည်း ဆွမ်းခံ ထွက်ကာမှ ဒုက္ခကြုံရပြန်သည်။ #ဖတ်ပါ မရီကြေး “တောဘုန်းကြီး´´ “အရှင်ဘုရား ရပ်တော်မူပါဦး ဘုရား : … Read more